Unogona kundiratidza chinhu chakanaka chekuwedzera Amazon sales?
Tisati tatanga, ngatishandisei - chigadzirwa chako chine zvakawanda zvakakunakira kutarisa nekugadzirisa iwe kuti uwedzere kubudirira Amazon kutengesa kuita zvose. Izvo zvaizova basa risingagoneki kana kuti risingazogoneki zvachose, kunze kwekuti iwe uchizozvibatsira iwe nekutsvaga kwakarurama uye chikwata chekutsvakurudza. Nenzira yakanaka, pane pane zvakawanda zvakagadzirwa software zviripo zvino pamusika - servidores de archivos dedicados. Kunyange zvazvo mugove weshumba wevabatsiri vepaIndaneti inogona kushandiswa kusununguka, vamwe vevane simba zvikuru vari kupa zvikamu zvavo zvakakwana-mafuta pamutengo wakabhadharwa. Kunyange zvakadaro, heyi ma matatu matatu ari pamusoro pekugadzirisa nekugadziriswa kwekushandiswa-kukurudzira Amazon yako kutengesa uye kuita zvimwe zvinhu zvakanyanya nyore.
Mhinduro Genius - ingangodaro yakagadzirirwa zvakagadziriswa purogiramu yekuongorora kuAmazon inoshandiswa pakuita kuti mutengi wose agutsikane, hongu, kana iwe usingadi kuwana chigadzirwa chako chinyorwa chakatorwa kusvika pasi pekutsvaga uko. Chirongwa ichi chakashanda kwandiri semashiripiti, sezvo ndakashamiswa pamhinduro dzose dzisina kunaka dzinodaro nekugadzirisa-nguva isati yasvika iyo inogona kuparadza chero dambudziko rakaipa mubhizinesi rangu. Zvimwe-iwe unogona kushandisa Feedback Genius kuti uite runhare yakadhindwa nenzira yekukumbira kwakanaka kwevatengi vatsva - kungokumbira kubvisa mhinduro yakanaka kana kuongorora. Uye inoshanda, nokuti kuchengetedza kugutsikana kwekwanisi kwekambani nguva dzose kwave kuri maitiro akajeka - kwete kungosimudzira Amazon kutengesa, nhu kuti ipe chinangwa kune imwe purojekiti yebhizimisi.
Jungle Scout - inogona kuva yakagadzirisa sarudzo yekusimudzira Amazon kutengesa kune avo vatengesi vakazviwana vasina kuwana ruzivo rutsva rwechigadzirwa chezvinhu zvitsva, maitiro ekugadzirisa kana kugoverwa kwakanaka kuti vasiye mukwikwi chaiwo wekucheka unotonga ikoko. Zvichengete iwe purogiramu uye usambofa wakakanganwa mikana yekufungidzira, nguva nenguva. Ndezvipi zvinowanikwa zviri pamusoro pekutengesa kwemaAmerica ikozvino? Ndezvipi zvipfeko zvangobva kuwedzera kuwanda? Ndezvipi zvishandiso zvinoshandiswa zvakatodiwa zvakanaka uye zvakakodzera kuratidzira muzvigadzirwa zvako zvakagadzirwa? Jungle Scout izuva rakanaka rinotarisa rinokubatsira kuti ufukidze chero ruzivo rwakavanzwa rwemari kuti uwedzere Amazon yako yekutengesa uye urambe uchitsika nhanho imwe mberi kwevatengesi vako vemisika.
Uye ini ndinokurudzira zvakasimba kunyanya kuedza ichi chinhu kuti uwane zvimwe zvezvinotevera: mazwi ekufambisa-mazwi makuru nemitsara yekutsvaga yemakwikwi ako aripo nokuda kwebatsiro rako pachako, yakaisvonaka zvakanaka optimization ye PPC mishandirapamwe, ruzivo rwakakosha pane zvingave zvine simba mazwi, nzira yepamusoro-soro yemiganhu nemakwikwi mashomanana kuti iwe upinde mukati, uye kunyanya. Mushure mezvose, nehuwandu hwehutungamiri hwehutengo uye kutengesa kwekutengesa sarudzo Nyaya inoshandiswa inowanzoshandiswa seye-stop-shop-kunyange nevepamusoro vane unyanzvi hwekukuru-time muAsia.